သူတော်ကောင်းတို့သည် မယဉ်ကျေးသော သူနှင့်တွေ့သောအခါ အ .. ဒေါသ ( ဒေါသမဲ့စွာ နေလေ၏ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူတော်ကောင်းတို့သည် မယဉ်ကျေးသော သူနှင့်တွေ့သောအခါ အ .. ဒေါသ ( ဒေါသမဲ့စွာ နေလေ၏ )
သူတော်ကောင်းတို့သည် မယဉ်ကျေးသော သူနှင့်တွေ့သောအခါ အ .. ဒေါသ ( ဒေါသမဲ့စွာ နေလေ၏ )
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Jan 3, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
အောက်တွင် ကျွန်ုပ် ဖေါ်ပြပါ လတ္တံ့သော အကြောင်းအရာသည် ကျွန်ုပ်နှင့်တစ်ကွသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
သိနှင့်ပြီး ( အထင် ) ဖြစ်သော အဖကို သတ်သော အဇာတသတ် ဘုရင် ၏ မသိခြင်း မောဟကြောင့်
ဒေါသဖြင့် အဖကို သတ်ခဲ့ပြီးသည် သကာလ နောင်တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်၏
ထိုသော အဇာတသတ်ဘုရင်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှင်တော်မြတ်အား
ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ၂ – သာမညဖလသုတ်
အသျှင်ဘုရား မိုက်သည့် အလျောက်တွေဝေသည့်အလျောက် မလိမ္မာသည့် အလျောက် အပြစ်သည် အကျွန်ုပ်ကို လွှမ်းမိုး သွားခဲ့ပါ၏၊ အကျွန်ုပ်သည် တရားစောင့်သော တရားသဖြင့် မင်းပြုသော ခမည်းတော်ကို မင်းစည်းစိမ် ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ်ခဲ့မိပါ၏၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအကျွန်ုပ်၏ အပြစ်ကို နောင်အခါ စောင့်စည်းခြင်းငှါ အပြစ်ဟု လက်ခံတော်မူပါ အသျှင် ဘုရား ဟု လျှောက်၏။
အထက်ပါအတိုင်း အဇာတသတ်ဘုရင်မှ မိမိ၏အမှားအား ဝန်ခံပြီးသည့်အခါ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားလေ၏။
၂၅၁။ မင်းကြီး မိုက်သည့်အလျောက် တွေဝေသည့်အလျောက် မလိမ္မာသည့်အလျောက် အပြစ် သည် သင့်ကို စင်စစ် လွှမ်းမိုးသွားခဲ့၏၊ သင်သည် တရားစောင့်သော တရားသဖြင့် မင်းပြုသော ခမည်းတော်ကို သတ်ခဲ့မိ၏၊ မင်းကြီး သင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်၍ အပြစ်အား လျော်စွာ ကုစားသောကြောင့် သင်၏ ထို (အပြစ်) ကို (အပြစ်ဟု) ငါတို့ လက်ခံကုန်၏၊ မင်းကြီး အကြင်သူသည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်၍ အကြောင်းအားလျော်စွာ ကုစား၏၊ နောင်အခါ စောင့်စည်း၏၊ (ထိုသူ၏) ဤ (ကုစားစောင့်စည်းခြင်း) သည် အရိယာ၏ ဝိနည်းအဆုံးအမ၌ ကြီးပွားခြင်းပင်တည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်အနည်းငယ် ပြောဆိုလိုသည်မှာ
သတ္တလောကသားတို့မည်သည် ရှစ်ပါးသော လောကဓံတရားတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရမြဲဖြစ်သည်မှာ
( လာဘော စ လာဘ်ရခြင်း၊
အလာဘောစ- လာဘ်မရ ခြင်း၊
နိန္ဒာစ- ကဲ့ ရဲ့ခြင်း၊ အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း၊
ပ -သံသာစ- ချီးမွမ်းခြင်း၊ အချီးမွမ်းခံရခြင်း၊
ဒုက္ခဉ္စ- ဆင်းရဲခြင်း။ )
ကျွန်ုပ်တို့ ( အထူး ) သတိပြုရန်မှာ ဤသောလောက၌ ဆိုခဲ့ပြီးသည့် ထို လောကဓံ ရှစ်ပါးနှင့် ကင်းလွတ်သည့်
သတ္တဝါဟူသည် ( လုံးဝ ) မရှိဘူးခဲ့ခြင်းပင်တည်း။ ( သဗ္ဗညု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်သည်ပင် အဝင်ပါ )
လောကဓံတရားတို့နှင့် တွေ့ကြုံရလေသောအခါ မတုန်လှုပ်ခြင်း သည် မင်္ဂလာ မည်ပေ၏ ဟု
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်၏ အဆုံးအမတွင် နေထိုင်သင့်ကြပါကုန်၏ ဟု ရိုးသားစွာ တိုက်တွန်းပါပြီး
ဒေါသရှိသော သတ္တဝါနှင့်ကြုံရသောအခါ အ .. ဒေါသ( ဒေါသမဲ့စွာ ) ဖြင့် နေကြကုန်လေ၏။
ကျွန်ုပ်သည် အရိယာမဟုတ်သော စိတ်ကို ကောင်းစွာမစောက်တည်နိုင်သေးသော
သို့သော် ငါလောကီသားဘဲဟု ( ခံယူ၍ ) မည်သည့်အခါမျှ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဦးချိုမတတ်ပါ
အကြောင်းအရာ တစ်ခုပေါ်တွင် မိမိ၏ ခံယူချက်ဖြင့် ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းအား
( လောကီထဲမှ ) မိမိ၏ ခံယူချက်တွက် နောင်တရခြင်းသည် လူညံ့တို့၏ သဘောပင်ဖြစ်ခြေ၏။
ကျွန်ုပ် လူတော်တစ်ယောက်ဟု မခံယူနိုင်သေးသော်လည်း
လောကသားတို့၏ အရပ်ဌာနတို့တွင် ချိုးဖေါက်ခဲ့သော ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကြောင့်
ဘဒ္ဒ န္တဦးဘဇင်းမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဟူသော အမည်ကို
ဤ ဆိုဒ်အတွင်းမှ နှုတ်ထွက်ပါသည် ( သောက်ကျီးသောက်ကျယ် သောက်ကြောင် )
ခင်ဗျားတို့ တော်တော်စိတ်နုရင် နိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့ ဖင်ခံစား
အားလုံးကို အထူးတိုက်တွန်းပါတယ် မိမိတို့စိတ်ကို ကောင်းစွာစောက်တည်ကြပါ
ကျုပ် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး
ခင်ဗျားတို့ စိတ်ချမ်းသာဘို့ အပျင်းပြေ
နောင်များ ဖီးလ်းလာရင် ဝင်ဆဲဦးမှာ ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့
နောက်ထပ်နာမည် တစ်ခုနဲ့ ဝင်လာဦးမှာ
ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော် ယဉ်ကျေးမယ်လို့ ထင်ရင် ဒီ .. ကျုပ် ဘရုတ်သုတ်ခ လုပ်ပျီး
ဒီအထဲမှာ ဘာမှ လာဝင်မရေးနဲ့ လာရေးတဲ့ကောင် လီးဘဲ
( ဟဲဟဲဟဲ ကျုပ်က အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ မျက်ရည်တော့ ဘယ်ကျပြသွားမလဲ ဗမာပီပီ ဂိုဒေါင်လေးဘာလေး မီးရှို့ခဲ့မှာပေါ့ )
အဆဲခံရလည်း ၀င်ရေးတယ်ဗျာ …
ခင်ဗျားရဲ့ မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို မြည်းစမ်းခွင့်မရတော့ဘူးပေါ့
No body is perfect i am nobody …
အခုလို မီးလောင်ခြင်း အပေါ် သဲလွန်စ ကို ချီးမြင့်တော်မူသည့် အတွက်
မိန်းမနဲ့ အဆင်ပြေရင်.ဘောပွဲ ပြန်နိုင်ရင်…အိပ်ရေးဝရင်…အလုပ်ပြန်ခန့် မကွဲ့ 
နာ့တောင် မိန်းမအလုပ်ထိုင်စားတာကြာပြီ (နောက်တာ)
ကိုရီးယားလိုပြောရင် ဟိုက်တီးဆိုလား ဖိုက်တင်းဆိုလား မသိဘူး
နင်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ် ဆောရီး အားပေးတယ်
မြန်မာလိုပြန်ရင် ဟင်တိုက် ဖင်တိုက်လားခင်ည
လာရေးတဲ့ ကောင် ” လဲဗီး ” ဆိုရင်တော့
ကျုပ်ကတော့ ” လဲဗီး ” မကြိုက်ဘူး ။
” Lee ” ပဲ ကြိုက်တယ် ။
Size ကတော့ 30 နော် ။
ခါးကို ပြောတာပါ ။
ဒီနှစ်၂၀၁၂ကစလို့.. ဒီရွာထဲဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ.. ဆဲခွင့်မပေးတော့ပါဘူး..။
အရင်က.. ကိုရင်အောင်ပုဆဲရေးတာတွေမှာ စေတနာတချို့တွေ့ရတာမို့.. အထူးအနေနဲ့ခွင့်ပြုထားပေမဲ့.. ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး..တချို့ရွာသူားတွေကိုပါ.. ကူးစက်သွားတဲ့အတွက်.. စာဖတ်သူ..စာရေးသူ..သက်ကြီးဝါကြီးနဲ့ ..ရဟန်းတွေကိုပါ.. ထိုက်သင့်ပေးအပ်တဲ့. အပြန်အလှန်.လေးစားသမှုမရှိဘူးဖြစ်သွားရပါတယ်..။
အဲဒီစည်းကမ်းလေးလိုက်နာပေးစေလိုပြီး.. ရွာထဲပျော်ပျော်ပါးပါး.. (အမည်လည်းမပြောင်းပဲ)ဆက်နေစေလိုပါတယ်..။
သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်.. ဒီရွာကြီးဟာ.. ရွာသူားတွေကိုပေးဆပ်ခြင်းနဲ့သာ.. ရပ်တည်နေတာပါနော..
အပြန်အလှန်အားဖြင့်..ရွာသူားတွေက.. ပြန်ပေးဆပ်ရင်း.. ပျော်စရာအသိုင်းအ၀ိုင်းလေးတည်ဆောက်ထားသမို့.. .. ကောင်းမွန်တဲ့.. နေအပ်..နေကောင်းတဲ့အရပ်ပါ…။ စွန့်ခွာအပ်တဲ့အရပ်မဟုတ်ပါဘူး..။
အောက်ကလင့်ခ်က ပို့စ်(အဆဲခံခြင်လို့ကိုရေးတယ် ( ၃ ))မှာ.. ကိုရင်အောင်ပု.. ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားသုံးနှုန်းထားတာ..(ဆဲထားတာ) ပို့စ်ပိုင်ရှင် ကိုရင် FR ကမကြိုက်ပါဘူး..။
တောင်းပန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်..။(ကျုပ်ကတော့ အချက်အလက်အခြေအနေအရ… တောင်းပန်သင့်တယ်ထင်လို့… တောင်းပန်ပြီးပါပြီ)
တောင်းပန်ခြင်း..ခွင့်လွှတ်ကြေအေးခြင်းဆိုတာ.. မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပါ..။ ( ဂေါတမဗုဒ္ဓလည်း ဟောထားပါတယ်)
အဲဒီလိုဆိုရင်.. အကုသိုလ်စိတ်တွေ.. အပြစ်တွေ.. သံသရာမလည်ပဲကြေပါတယ်..
ဘဒ္ဒန္တကြီး ခင်ဗျ …
ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဘဒ္ဒန္တကြီးကို ရွာထဲမှာ အခုနာမည်နဲ့ပဲ ဆက်နေပေးဖို့၊ ရွာထဲကနေ ထွက်မသွားဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘဒ္ဒန္တကြီးဟာ ခင်မင်စရာ ကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော် မြင်မိလို့ပါ။
ဘဒ္ဒန္တကြီးကို ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် ပြောချင်တာကတော့ အဟဲ … ဆရာ လုပ်တယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။
အဝင် ဆိုးပေမယ့် ရောဂါကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပျောက်ကင်းသက်သာစေတဲ့ ဆေးတစ်ခွက်နဲ့ ‘ဖရုသ’ ရဲ့ အနက်ကို အမြဲတမ်း တွဲဖက် မထားသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ….
ဘဒ္ဒန္တကြီး ဆဲလည်း ဆဲခံရမှာပါပဲ …….
ကိုရင် အောင်လဘု မဟုတ်ပါဘူးချင့်
ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီး အူးဘဇင်း အောင်လဘု ဖြစ်သွားပါဘီချင့်
အောင်မာ ဒင်းက အခုတလော ငြိမ်နေလို့ မသောက်တော့ဘူး မှတ်တာ၊ ခွက်ပုန်းချသေးသကိုး။ ကိုအောင်ဘု ရွာထဲမနေတော့ရင် သူ့နာမည်ကို ကျုပ်ယူမယ်။ သဂျီးက တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီး ရွာကမ်းနားမှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဆောက်တော့မှာ။ အဲဒီကျမှ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နာမည်ပြန်လာ မတောင်းနဲ့။ ပြောပြီးစလစ် နံပါတ်တစ်။
ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု (ခ) ဦးကြောင်ကြီး
သဂျီးက ဘယ်တီလုပ်နဲ့ ပေါင်းမှာတုန်း ဂျ ….ဂေဇက်တီလိခ် လုပ်ပါဦး အူးကြောင်…
စကားမစပ် ဟိုမြေပုံလေး ရဘီနော …ပို့လိုက်မယ်…နက်ဖန် ..အာဟိ
ကိုအောင်ပုကို အရင်က အကြံပေးဖူးပါတယ်။
လ-အက္ခရာနေရာမှာ ရ-အက္ခရာ ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါလို့ ဆိုတာကိုး မပြောချင်ဘူး။
လိင်တူချစ်သူများအတွက် တချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုအောင်ပု။
လုပ်ချင်တာ(သို့) မလုပ်ချင်တာ ကို အဓိကမထားနဲ့။
ဖြစ်ချင်တာ(သို့) မဖြစ်ချင်တာ ကို အဓိကမထားနဲ့။
မရှိမဖြစ်ပု ဘာတွေစိတ်ကောက်နေတာလဲ၊ရွာထဲနှံ့နှံ့စပ်စပ် မလည်တာကြာလို့ မသိပါ၊